‘घर फर्काइदिनु होस्’ « Loktantrapost
‘घर फर्काइदिनु होस्’
२७ भाद्र २०७४, मंगलवार ०८:४४
मेरो नाम बिस्मिता दर्जी हो । म २४ बर्षकी भएँ । मेरो घर मेचीनगर–९ मा छ । हाल म कुवेतमा घरेलु कामदारको रुपमा छु । तर मलाई कुवेतको कुन ठाउँ भन्ने पनि थाहा छैन । मलाई मेरै ओडाकी दिदी मीना कामीले दिल्लीको बाटो हुँदै २०७३ पुस १ गते कुवेत पठाउनु भएको हो । दुई पैसा कमाएर जग्गा किन्ने र घर बनाउने सपना बुनेर म १ बर्षकी छोरी छाडेर आएँ । तर पैसा त के आज मेरो ज्यान नबच्ला कि भन्ने जोखिममा परेको छ ।
मलाई मेरो इज्जत जोगाएर पुनः नेपाल आई घरवार बचाउन सक्छु होला जस्तो पनि लाग्न छाडिसक्यो । मेरो उद्धार गरिदिनुहोस् । मलाई बचाइदिनुस् । मैले तलब पनि पाएकी छैन । तलब माग्दा चरम शारीरिक तथा मानसिक यातना दिन्छन् । खान समेत नपाएको धेरै भइसक्यो । पानी र पाउरोटीको भरमा दिन गुजार्दैछु । चाँडै मेरो उद्धार हुन सकेन भने मेरो लाश पनि घरमा आउँदैन होला । दिनरात रोएर विताइरहेकी छु ।
मीना दिदीलाई धेरै चोटी फोन गरेर मलाई यो नर्कबाट उद्धार गरिदिनुहोस् भनेँ । तर उहाँले डेढ लाख रुपैयाँ पैसा पठा कि ३ जना मान्छे खोजि दे अनि मात्र तँ आउन पाउँछेस् भन्नुभयो । तर म आफै बन्दी बनेकी छु । कहाँबाट ल्याउनु त्यत्रो पैसा ? कहाँबाट मान्छे खोजिदिनु ? घर फर्काइदिनु म मङ्सिरसम्ममा ऋण गरेर पनि तपाईलाई त्यो पैसा दिन्छु भनेँ, तर उहाँले मान्नु भएन । तपाई पत्रकारहरुले मेरो उद्धार गरिदिनु होस् ।
अहिले त मीना दिदी ठूलो मान्छे बन्नु भएको छ । गाउँमा अरुलाई न्याय निसाप दिनुहुन्छ रे । तर म जस्ता निरीह महिलालाई बेचेर आफू मोटाउने काम गर्ने मान्छे कसरी ठूलो बन्नु भो ? ठूलो बन्नु भनेको गरीबलाई बेच्नु हो कि क्या हो भन्ने लाग्न थालिसक्यो । जसरी हुन्छ मलाई मेरो घर फर्काइदिनुस् मीना दिदी । म नेपालमा आउन पाएँ भने बनीबुतो गरेर भए पनि मीना दिदीले मागेको पैसा दिने छ ।
(लोकतन्त्र पोस्टसँगको टेलिफोन वार्तामा आधारित)